Caalamka, 28 October 2019
Isniin 28 October 2019
Arday Iraq oo ku biiray dibad-baxyada ka dhan ah dowladda
Ardayda iyo caruurta iskuulada ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada Baghdad iyo koonfurta Iraq, si ay ugu biiraan dibad-baxyada ku baaqaya in dowladda ay is-casisho.
Trump: Waxaan dilnay Al Baghdadi
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in hogaamiyihii ururka ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, lagu dilay weerar milatariga Mareykanku ka fuliyay Sabtidii shalay Gudaha Syria.
Warbaahinta: Al-Baghdaadi waxaa lagu Dilay Suuriya
Ilo-wareedyo ku sugan dalalka Suuriya, Ciraaq iyo iran ayaa maanta oo Axad ah sheegay in la aaminsan yahay in hoggaamiyaha ururka Daacish Abuubakar Albaghdaadi lagu dilay howlgal Milatari oo uu Mareykanku fuliyay oo ka dhacay Suuriya.
Dibad-baxyada Lebanon oo galay toddobaadkii labaad
Dibad-baxyada aan caadiga ahayn ee ka socda dalka Lebanon ayaa galay toddobaadkii labaad, ayada oo banaan-baxayaasha ay iska indho-tireen ciidamada, si ay xannibaan waddooyinka.
DP World: Dacwaddii Djibouti way na Dhaawacday
Shikradda DP WORLD ee dalka Imaaraadka ayaa sheegtay in muranka iyo dacwaddii dhexmartay iyaga iyo dowladda Djibouti ee ku aadanaa maamulka Dekedda Doraaleh, ay taasi dhaawac gaarsiisay shirkadda, isla markaana ay ku adkaatay inay bangiyada caalamka ka hesho deyn ay ku maalgaliso mashaariic cusub
China oo casuuntay wafdi Taliban ah
China ayaa wufuud ka tirsan Taliban ku casuuntay inay ka qeyb-galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay kooxdaas.
Erdogan iyo Putin oo gaaray heshiis ka dhan ah Kurdiyiinta
Shirweynaha Africa iyo Russia oo maanta furmaya
Waxaa maanta lagu wadaa in magaala xeebeedka Sochi ee dalka Ruushka uu ka furmo, shirweynihi ugu horreeyay ee u dhaxeeya Ruushka iyo dalalka qaaradda Africa.
Ciraq: Ciidamada Mareykanka ma haystaan fasax joogitaan
Ciidamada Mareykanka ee ka baxay Syria, una tallaabay Ciraq, ma haystaan wax fasax ah oo ay dalkaas ku joogaan, waxaana ay halkaas ku joogaan si ku-meel gaar ah, waxaa sidaas maanta sheegtay militariga Ciraq.
Justin Trudeau oo ku guuleystay doorashada Canada
Ra’iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa maanta guulo ka sheegtay doorashadii dhacday isniintii, isaga oo mar labaad loo doortay inuu dalka hoggaamiyo kadib markii xisbigiisa Liberal-ka ay baarlamanka ka heleen codad ku filan si uu usii ahaado xisbiga talada haya.
Doorashooyinka Canada oo maanta dhacaya
Doorashooyinka guud ayaa ka dhacaya dalka Canada maanta, iyadoo ra’yiga laga qaaday dadweynaha ay muujinayaan in ra’iisul wasaare Justin Trudeau uu wajahayo loolan adag.
Sacuudiga: Carro ka dhalatay canshuur la saaray shiishadda
Go’aan canshuur 100% ah loogu soo rogay maqaayadaha Sacuudiga ee iibiaya shiishadda ayaa dhalleeceyn xooggan ka dhaliyey baraha bulshada dalkaas, oo shiishadda ay caan ka tahay.